ချွဲကြပ် ခြင်း - Hello Sayarwon
ကူးစက်ရောဂါများ » ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
Update Date ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2021 .2mins read
ခုရက်ပိုင်း ရာသီဥတုလေးအေးလာတော့ လည်ချောင်းထဲက နာသလိုလို၊ ချောင်းဆိုးချင်သလိုလို၊ ချွဲကြပ် ချင်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်။ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုက စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းပေမယ့် ရောဂါအခံရှိနေသူတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေအတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာပါ။ အေးမြတဲ့ အနေအထားမှာ ရောဂါပိုးတွေက ပိုမိုရှင်သန်ပေါက်ဖွားလွယ်တာက ချောင်းဆိုးချွဲကြပ်တာနဲ့ လည်ချောင်းနာတာမျိုးတွေကို အလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း ပိုဆိုးအောင် အားဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ အဖြစ်အများဆုံးနဲ့ ခံစားရတော်တော်လေးခက်တာက ချွဲကြပ်တာပါ။
ချွဲကြပ်တာက အရမ်းပြင်းထန်တဲ့အခါ ရင်ဘတ်ထဲမှာနေရတာခက်ပြီး အသက်ရှူရကြပ်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ချွဲကြပ်တာက တစ်ခါတလေမှာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းမှုဝေဒနာနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါသေးတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ချောင်းဆိုးတာက အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ မသက်သာဘဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသပေးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ချောင်းဆိုးတာက ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ အဆုတ်နဲ့ လေပြွန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ချွဲသလိပ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ် အပြင်ဘက်ကို ထုတ်ပေးတာပါ။ ချွဲကြပ်တဲ့အခါမှာတော့ ချွဲတွေက ပိုထူပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကို ထွက်ရှိဖို့ ပုံမှန်ထက် ပိုမိုခက်ခဲတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ အသက်ရှူရခက်တာ၊ အသက်ရှူကြပ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးတာ၊ ချွဲသလိပ်ထွက်တာတွေက ချွဲကြပ် တာရဲ့ သိသာတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေပါ။ ချွဲကြပ်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ ချွဲအရောင်က တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူတာမျိုးတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ချွဲကြပ်တဲ့အခါ ချွဲအရောင်က အကြည်ထွက်တာမျိုးရှိနိုင်သလို အဖြူရောင်၊ အစိမ်းရောင် ၊အဝါရောင်ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေနဲ့အတူ –
တကယ်လို့ ချွဲတွေက အဝါရောင်ဖြစ်နေမယ် ဒါမှမဟုတ် အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေမယ်၊ ချွဲနဲ့အတူ သွေးပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသဖို့ ပြောပါရစေ။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ ပြောပါရစေ။
ဒီအချက်တွေကြောင့် ချွဲကြပ် နိုင်ပါတယ်
ချွဲကြပ် တယ်ဆိုတာက လေပြွန်နဲ့ အဆုတ်ထဲမှာ ချွဲသလိပ်တွေ အရမ်းများနေတာကြောင့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သလိပ်တွေက အဆုတ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို စစ်ထုတ်ဖယ်ရှားပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါမျိုး အအေးမိဖျားနာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ချွဲတွေက ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။
လက်တွေကို သေချာသန့်စင်ပြီးတိုင်း ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပေးပါ
ချွဲကြပ်တာက အခန့်မသင့်ရင် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် သေချာသတိထားဖို့ ပြောပါရစေ။ ဆောင်းအေးအေးမှာ နေ့ရက်တိုင်းကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ…….
The Truth About Mucushttps://www.webmd.com/allergies/features/the-truth-about-mucus#1 Accessed Date 22 January 2019
Cough: productive or 'wet' coughhttps://www.mydr.com.au/respiratory-health/cough-productive-or-wet-cough Accessed Date 22 January 2019
Chesty coughshttps://www.mydr.com.au/respiratory-health/chesty-coughs Accessed Date 22 January 2019
What isachesty cough?https://www.flordis.com.au/health-insights/chesty-coughs/chesty-cough/ Accessed Date 22 January 2019
ချောင်းဆိုးခြင်း ၇မျိုးနှင့် သူတို့ဆိုလိုသည့်အရာ
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဂရုစိုက်မှုတွေ လုပ်ရမလဲဆိုပြီး သိချင်နေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးလေးထဲ ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။
အသားအရေနှင့် အလှအပ, ဝက်ခြံ စက်တင်ဘာ 14, 2021 .2mins read
ဘေဘီလေးတွေအတွက် သွားပွတ်တံ ဒီလိုရွေးပါ သွားပွတ်တံလေးက အဆင်ပြေမှလည်း ဘေဘီလေးက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် သွားတိုက်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်တော့မပေါ့။
အနီရောင်အသား ဆိုတာ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား တွေကို ခေါ်တာပါ။ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေက အနီရောင် အသားတွေကို လျှော့စားဖို့ အကြံပေးလေ့ရှိတာ ဘာကြောင့်များပါလဲ။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စက်တင်ဘာ 9, 2021 .3mins read
လေထုညစ်ညမ်းမှု က ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေနိုင်သလဲ………… သေချာလေး သိရှိရအောင် ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 8, 2021 .2mins read
အိပ်ရေးပျက်တာက အမြင်အာရုံကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေသလဲ……..
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 28, 2021 .2mins read
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ ကြားက ကွာခြားချက်များ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 16, 2021 .3mins read